mipetaka mafy, mifamatotra amin'ny vy, fikolokoloana vanjaingitra - Winrock
Fiarovan-tena tsy manan-danja
Fiarovan'ny solika sy gazy
Winrock dia mandray ny siansa sy ny teknolojia vaovao, hamorona marika iraisam-pirenena, ary ny vokatra dia efa ekena any amin'ny firenena sy any ivelany.
Winrock dia manamboatra indostrialy sy tsena isan-karazany. Na mitady mitady famerenana maromaro ianao na mitady vahaolana manokana, manana izay ilainao ianao! ...
Winrock dia manome drafitra ara-teknika ho an'ny vokatra rehetra, Azonao atao ny mijery ny data amin'ny aterineto, na maimaim-poana ilay endrika mari-pamantarana maimaim-poana.
Winrock dia mpandraharaha matihanina amin'ny famenoana manokana, manangana birao iray ao an-tanànan'i shanghai, ny toeram-pambolena dia ao an-tanànan'i Dongtai, faritanin'i Jiangsu. Ny fampiroboroboana dia fampiharana betsaka ho an'ny solika sy gazy, Petrochemical, Generation Power, fitaovana faneriterena, Valve ... Afaka mivezivezy isika mba hifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena na fepetra manokana ...
fifandimbiasam-boly 718 625 600 601 mihazakazaka hex bolina sy meny meny M6 M120
Ny tanjaky ny tanjonay dia ny hoe: Quality Flexibility International traikefa amin'ny fanatontosana ny fotoana Fanaterana ny famandrihana ny famandrihana Fepetra manokana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa: To drawings To customer specifications Fanandramana fanampiny amin'ny fitaovana tsy mahazatra Amin'ny loko tsy mahazatra Fidiram-bola manokana izay natao tamin'ny fenitra iraisam-pirenena. Ny endrika fanjaitra: Azo alahatra miaraka amin'ny ...
china mpamatsy 304 raozy rongony tsy foza hex bolongana 10mm ratra dia 12mm
1): M2, M3, M4, -4-40 / 6-32 2) Steel karbon + Zinc plated + Stainless Steel + POSITION SUS300. 3) Araka ny Drawing na ny Samples. 4). Toro-bidy sy boliby bebe kokoa: 1: Ambony avo lenta, vidin'ny fifaninanana, serivisy tena tsara ary famindrana haingana. 2: Fenitra samihafa amin'ny safidyo. 3: Ny vokatra rehetra dia nandalo ny fenitra iraisam-pirenena. 4: Varo-be lehibe: Mihoatra ny 800 taonina tsirairay. About our ...
M3, M6 tavy fiton-doha matevina solaitra matevina head capita titanium flange screws for surgical procedure
Inona no tombony azon'ny HPF? 1. Mpanatontosa mivantana 2 isika. Fanomezan-kalem-panahy: ISO9001-2008 Certified TUV SGS, CE nomerika, teknolojia matotra / rafitra 3. Professional Engineering Capability 4. Vidiny azo ekena sy mifanentana 5. Ireo baiko madinika sy ireo baiko lehibe dia noraisina 6. Mihoatra ny 20 taona niainana tamin'ny ...
Raha manana fanontaniana ianao, azafady mba fantaro. Hamaly anao izahay ao anatin'ny ora 12
custom cnc stainless steel cnc ho an'ny fiara
cnc fiarovan-dafy fiarovan-davenona tsy misy vy
M5 x 40mm 12.9 XMUMX menaheiro matea sodotra mateza
Fivarotam-barotra vita amin'ny ala avy amin'ny mpanamboatra ambony
Torom-borona matevina torx mofomamy / M5 torx screws
Email: [mailaka voaaro]